Izincwadi zomlando ezinhle kakhulu
Izincwadi ezi-3 eziphezulu zikaPaul Preston
Njengoba kuvame ukushiwo phakathi kwamahlaya neqiniso, eduze kwencazelo yesichazamazwi seSpanishi kufanele kuvele ubuso bukaPaul Preston. Ngoba, njengesazi-mlando (futhi ngokunembile ngentshiseko enkulu kulesi sici esingalapheki seSpanishi), lo mbhali waseNgilandi uphenye futhi ekugcineni waqoqa futhi wasabalalisa ...
M. Indoda yokuhlinzekwa, ngu-Antonio Scurati
Okuhlangenwe nakho kukhombisa ukuthi ukuhlinzekela kulindeleke ezikhathini ezimnyama kakhulu emhlabeni. Njengemvula yezivunguvungu ezinkulu, ngaphambi nje kokuba umbani ushaye. Akukho okungcono ukwedlula i-populism enhle ekwazi ukuzibonakalisa njengompetha wekusasa elihle kakhulu ukuze lolu kholo oluyinqaba luphele ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaHenry Kamen
Kunezinsuku eziyinqaba zokusebenza njenge-Hispanicist ehlonishwayo. Futhi ngaphandle kwalokhu, abafana abanjengoPaul Preston, u-Ian Gibson noma uHenry Kamen baphikelela ukuqhubeka nokugxila endabeni yokuthi, ukube bekungezinye izintando ezenzelwe amanga, inganekwane emnyama noma inzalo ye-ethnocentric, ingagcina iphazanyiswe ngokuphelele. ...
Isilingo seCaudillo, nguJuan Eslava Galán
Zigzagging phakathi kwamanoveli amakhulu omlando nemisebenzi efundisayo, uJuan Eslava Galán uhlala evusa isasasa elikhulu phakathi kwabafundi, intshisekelo yombhali oyiniswe ohlwini lwezincwadi njengoba ibanzi njengokukhanya kwayo. Kulesi senzakalo, u-Eslava Galán usisondeza eduze kwesithombe esaziwayo. Lowo onabashiqela ababili ohamba ...
Notre Dame, nguKen Follett
Mhlawumbe le ncwadi ingenye yezinto ezinhle ongazithatha kokunye kwezingozi ezinkulu zalokho esibe yikho ekhulwini lama-XNUMX. UKen Follett wayezobeka eceleni noma yini ayenzayo ukuze asinikeze incwadi ebhalwe kusukela kumuzwa oshisayo wokulahlekelwa okukhulu. Ngoba ngale ...
Amazwi aseChernobyl, kaSvetlana Aleksievich
Owayesayinwe ngezansi wayeneminyaka eyishumi ngo-Ephreli 10, 26. Usuku olubi lapho umhlaba wawusondela enhlekeleleni ethile yenuzi. Futhi into ehlekisayo ukuthi bekungeyona ibhomu elisongela ukuqeda umhlaba kwiMpi Yomshoshaphansi eyaqhubeka ...
Ubumnyama, nguCatherine Nixey
Futhi lapho uJesu efa esiphambanweni, usuku lwaphenduka ubusuku. Inganekwane noma ukusitheka kwelanga? yokwehlisa udaba lube yiphuzu elihlekisayo. Iqiniso ukuthi asikho isingathekiso esingcono sokubheka ukuthi ukuzalwa kobuKristu, onyaweni lwesiphambano, kwazuza lelo thoni elimnyama ...